Halkey Ku Nool yihiin Dadka Ugu Ammaanada Badan Dunida?(Muuqaal) | Baahin Media
Halkey Ku Nool yihiin Dadka Ugu Ammaanada Badan Dunida?(Muuqaal)
Daraasad lagu sameeyay heerka ammaanada ee wadamo badan oo dunida daafahooda kala duwan ku kala yaalla laga sameeyay muddo 4-sano ah la waday ayna faafisay jariidada Science ee cilmiga ah, in muwaadiniinta Shiinuhu ay yihiin dadka ugu ammaanada yar dunida, 40 dowladood oo dasaarasad goobeed laga fuliyay.
Natiijada daraasaddan oo ay isha ku hayeen khubarada jaamacadda Zurich ee Switzerland, ayaa waxaa laga ogaaday in muwaadiniita Shiinaha u dhashay ay yihiin kuwa ugu ammaanada liita marka loo eego dadyowga kale ee dunida, waxey soo celiyaan boorsada lunsan marka aaney lacagi ku jirin oo qura, sidaa darteed; waxey halka ugu hooseysay kaga jiraan daraasaddan dadka ugu ammaanada yar dunida.
Shuruurdda daraasaddan, boorsooyinka la qeybinayo ee waddooyinka la dhigay waxey ahaayeen kuwo khafiif ah oo ay ku jiraan aqoonsiga qofkii iska lahaa, boorsooyinka waxaa ku jira lacag 13 dolar ah oo lagu sarifay lacagta maxalliga ah ee waddankaa laga isticmaalo, waxaa la socday warqadda aqoonsiga milkiilaha boorsada iyo emailka laga heli karo.
Boorsooyinka qaarkood wey haawanayaan oo wax lacag ah kuma jirin, guud ahaan waxaa luntay oo aan ciddii iska lahayd loo celin 17 kun oo boorso, waxaana daraasadda ka soo baxday in marka Shiinaha laga yimaaddo ay kaalmaha hoose liiskan kaga jiraan dhanka Ammaanada Malaysia, Imaaraatka, Morocco, Kaasakhistan, Maksiko, Bayruu, halka ugu hoosaysa ee liiska.
Dhanka kale, dowladaha 5ta ah ee ugu ammaanada wanaagsan waxey noqdeen; Switzerland, Netherlands, Poland iyo Sweden.
Arrinta layaabka leh ayaa ahayd, in wadamada intood badan marka ay boorsada lacagi ku jirto soo celinteedu ay badneyd, maadama dadka badankoodu ay aaminsan yihiin in lacagtaas oo la qaato ay tahay xatooyo bareer ah.
Waxaa si gaar ah loo arkay in farqiga ammaanada ee natiijooyinka wadamada ay aad iskugu dhow dhow yihiin, sida; Bayruu iyo Gana iyo Jili oo kale, waxaana caddaatay in dadka ugu ammaanada badan ay ku nool yihiin Helisinki caasimaadda Finland iyo Mumbai ee dalka India.